Xiaomi Mijia M365 လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Gadget သတင်း
Xiaomi M365 ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Nacho Cuesta | | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, reviews
ကျနော်တို့ Xiaomi Mijia M365 ဆိုင်ကယ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်, အဓိကစပိန်မြို့ကြီးများသို့၎င်း၏လမ်းကိုတွေ့နှင့်, တဖြည်းဖြည်းအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအမှန်တကယ်အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် Iberian ပိုင်နက်၏ထိုးဖောက်သောထုတ်ကုန်။
လျှပ်စစ်စကူတာများသည်အနာဂတ်အတွက်လား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ပစ္စုပ္ပန်မှာရှိနေပြီဆိုတော့ဒီ Xiaomi လျှပ်စစ်လူနာမော်ဒယ်ရဲ့သော့တွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြမှာပါ။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
1 Xiaomi M365 ဟာအကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်လား။
2 ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံ
Xiaomi M365 ဟာအကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်လား။
ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမြန်ဆုံးသို့မဟုတ်ဈေးအပေါဆုံးမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်မျှတမှုအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည် အထူးချွန်ဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခု တ ဦး တည်းလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖို့ရှာဖွေနေသောအခါ။
သို့သော်၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဟန်ချက်ညီဆုံးဖြစ်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ Xiaomi သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ဘက်ထရီများ၊ LED မီးများ၊ အကြေးခွံများစျေးကွက်တွင်၎င်း၏တည်ရှိမှုကြောင့်စျေးကွက်တွင်အားသာချက်ရှိသည်ဟုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သည် မလိုချင်သော (သို့မဟုတ်လိုသော) မပါဘဲ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားသူတိုင်းကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ ဒီဟာကဘာလဲ
အကယ်၍ သင်သည်လျှပ်စစ်စကူတာနှင့်တစ်ခါမျှအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ပါကသင်၌ပထမဆုံးခံစားချက်မှာမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေတော့မည် ဖြစ်၍ သတိထားရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားစေသည် လုံခြုံမှုကင်းမဲ့မှုခံစားချက်ကိုပျော်စရာပျော်ရွှင်မှုနှင့်စတင်ဖလှယ်ရန်။
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်, အရှိန်မြှင့်နှင့်ဘရိတ်နှစ် ဦး စလုံးခံစားခဲ့ရပါပြီ။ သင်ယူမှုကွေးသည်အလွန်သေးငယ်သည် ဒါကြောင့်လူငယ်များနှင့်လူကြီးများသည်ဒီတိုတောင်းသောနေရာထိုင်ခင်းပြီးဆုံးသည်နှင့်ပြonceနာမရှိဘဲသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ECO စနစ်ရှိသော်လည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအပြင်အရှိန်မြန်နှုန်းကို ၁၈ ကီလိုမီတာ / ကန့်သတ်ပြီး၎င်းကိုပိုမိုချောမွေ့စေရန်အတွက်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုပြောင်းလဲပေးသည်။
အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ analog ဖြစ်ပါတယ် ကားတစ်စီးကဲ့သို့ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာ၏လမ်းကြောင်းပေါ် မူတည်၍ မီလီမီတာအနည်းငယ်သာရွှေ့လျှင်စကူတာသည်အမြန်နှုန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းနိုင်သည်။ ငါ အံ့အားသင့်စရာတည်ငြိမ်မှု ဒီ Scooter ရဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာအခက်အခဲမရှိလမ်းလျှောက်တဲ့သူနဲ့တူတူပဲစည်းချက်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကအခိုးအငွေ့ကိုအပြည့်အဝစွမ်းဆောင်နိုင်လျှင်၊ ရှေ့ဘီးတွင်တည်ရှိသည့် brushless motor ဖြစ်သည် အားလုံး၎င်း၏အာဏာကိုချက်ချင်းထုတ်လွှတ်ပေးပါစွမ်းအင်၏ 500W နှင့် 16nm ၏ torque သို့ဘာသာပြန်ပေးသောသော။ ကျွန်ုပ်တို့ရပ်နေသောရပ်တန့်ခြင်းမှရရှိသောအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်စွမ်းနှင့်စိုစွတ်သောတောင်မှမျက်နှာပြင်များရှိ၎င်း၏ဘီးသေးသေးလေးများမှကမ်းလှမ်းသောဆွဲဆောင်မှုသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။
ပြproblemနာမရှိဘဲတောင်ကုန်းများကိုတက်ပါ ဒါပေမယ့်သူကတခါတရံသူ့ကိုတက်ထားရန်အဘို့အခက်ခဲကြောင်းပြသထားတယ်။ အပြင်းထန်ဆုံးတောင်စောင်းများ (ဥပမာ၊ ကားဂိုဒေါင်တစ်ခုပေါ်သို့တက်ခြင်း) တွင်အချို့သောပြေးလမ်းတစ်ခုနှင့်အတူသွားရန်အကြံပြုလိုသည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် inertia နှင့်လုပ်သောတောင်တက်ခြင်းနှင့်အင်ဂျင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျော်လွှားနိုင်သဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်ခြေလျှောအလယ်တွင်ခြေထောက်တင်ထားရပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့စပိန်ပိုင်နက်မှာတွေ့ရတဲ့တောင်စောင်းအများစုဟာပြproblemနာမရှိဘဲကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဘရိတ်သည်နှစ်ဆဖြစ်သည်။ တဖကျတှငျကြှနျုပျတို့သညျနောကျဘီး၌ထားရှိထားသောစက် disc disc brake ရှိသည်။ ၎င်းသည် Scooter ကိုလုံခြုံစွာရပ်တန့်စေရန်စွမ်းအင်လုံလောက်စွာသာမက Xiaomi Mi Scooter ၏မော်တာလည်းရှိသည်။ သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးဘရိတ်ရှိပါတယ် ထို့ကြောင့်ဘရိတ်အုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သယ်ဆောင်သောထို kinetic energy ကိုလျှပ်စစ်စကူတာ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုချဲ့ရန်အသုံးပြုသည်။
ရှေ့ဘီးဘရိတ်တစ်မျိုးသည်သတိပြုရန်အရေးကြီးသည် ဘီးသော့ခတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသော ABS စနစ် ခက်ခဲသောဘရိတ်ဖွင့်ခြင်းတွင်မြေပေါ်သို့မကျရောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘေးကင်းရေးကိုတိုးတက်စေရန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခု
ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ်ကောင်းသွားမလား။ သံသယမရှိပါကဘရိတ်ခံစားမှုသည်အတိုင်းထက်အလွန်သာလွန်ပြီးလက်ချောင်းတစ်ချောင်းတည်းသာအသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အားနည်းချက်မှာစနစ်သည်စျေးနှုန်းပိုမိုကြီးထွားလာပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘရိတ်ဘရိတ်နှင့်အတူပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာလိမ့်မည်။ \_ t ဘရိတ် caliper ဆွဲသောလီဗာနှင့်ကေဘယ်နှစ်ခုစလုံးသည်စက်ဘီးမှဖြစ်သည် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပိုပစ္စည်းတွေချက်ချင်းနှင့်အနည်းငယ်သာပိုက်ဆံများအတွက်ရပါလိမ့်မယ်။
နှစ်သိမ့်မှုအဆင့်မှာ Xiaomi ဆိုင်ကယ်သည်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေအလွန်ခက်ခဲသည်။ မြေပြင်အနေအထားတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောမတော်တဆမှုများသို့မဟုတ်မညီမညာမှုများသည်ကားလမ်းများသို့ကူးစက်သွားပြီးလမ်းမျက်နှာပြင်အနေအထားကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့လက်များသည်ရှည်လျားသောစီးနင်းမှုများကိုနာကျင်စေနိုင်သည်။ ဆိုင်းငံ့ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာဘီးပေါ်တွင်ဖိအားနည်းနည်းဖြင့်စီး။ တာယာကိုယ်တိုင်မြေအနေအထားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မလုပ်နိူင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြတ်သန်းခြင်းမရှိဘဲထိုးဖောက်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြတ်သန်းခြင်းမပြုရ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့်သွားလျှင်ပင်ကွေးပတ်ပတ်လည်တွင်လျှောထွက်နိုင်သည်။
Scooter ရဲ့သက်သောင့်သက်သာသက်သာမှုကိုသိသာထင်ရှားစေဖို့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ သင့်ရဲ့ရော်ဘာချုပ်ကိုင်ထားမြှုပ်သူများနှင့်အစားထိုးလိုက်ပါ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ။ စက်ဘီးစီးသူများသည်ထိုက်တန်သည်။ ရွေးချယ်စရာမော်ဒယ်များစွာရှိသည်။ (Ritchey တံဆိပ်တွင်အနည်းငယ်ရှိပြီးယူရို ၁၀ ထက်မကျော်ပါ) ။ ချုပ်ကိုင်ထားမှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဘီးပေါ်တွင်ဖိအားလျော့နည်းခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်တောင့်သက်သာသက်သာမှုနှင့်တုန်ခါမှုကိုလျော့နည်းစေလိမ့်မည်။
ငါလည်းကြိုက်တယ် ကျနော်တို့ရှေ့နှင့်နောက်ကျောနှစ် ဦး စလုံး built-in အလင်းအိမ်ရှိသည်။ နောက်မီးသည်သက်ဆိုင်ရာလီဗာကိုလည်ပတ်ချိန်တွင်အနေအထားအလင်းအဖြစ်သာမကဘရိတ်မီးကဲ့သို့ပြုမူသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းပေါ်သို့သွားလျှင်ကားများနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချနေကြောင်းသိရလိမ့်မည်။ သို့မှသာသူတို့သည်လည်းလုံခြုံစွာကြိုတင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ။
ရှေ့မီးအလင်းသည်ကောင်းစွာအလင်းဖြန့်ပြီးမှန်ကန်သောစွမ်းအားရှိသည် ငါတို့ရှေ့မှာငါးခြောက်ခြောက်မီတာရှိတာတွေကိုထွန်းလင်းစေဖို့။ ၎င်းသည်အလွန်အင်အားကြီးမားခြင်းမရှိသောကြောင့်ညအချိန်တွင်သင်စီးနင်းပါကသံခမောက်ကိုရှေ့တန်းဖြင့်ဖြည့်စွက်လိုပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသောခရီးတိုများအတွက်၎င်းသည်လုံလောက်ရုံထက်မကပါ။
ငါတို့ခရီးကိုရောက်ပြီဆိုရင် ၁၅ မိနစ်လောက်စကူတာကိုသုံးတယ် အများဆုံးမှာ။ ကျနော်တို့ကစတီယာရင်ကော်လံပေါ်ရှိအမြန်လွှတ်ခြင်းကိုလွှတ်ပြီးခေါက်ပြီးနောက်ဘီးနှင့်ခေါင်းလောင်းပါသောခလုတ်တစ်ခုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအခြိနျတှငျကြှနျုပျတို့သညျ (အလေးချိန် ၁၂.၅ ကီလိုဂရမ်) သယ်ဆောင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အဆင်ပြေစွာဆွဲယူကာမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောမော်တော်ယာဉ်၏ပင်စည်နှင့်ပင်ကိုက်ညီသည်။
မြို့တော်ဆင်ခြေဖုံးတွင်ရှိသောမြို့များတွင်နေထိုင်သောသူများသည်ကားဖြင့်ကားဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်၊ အလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်inရိယာတွင်ကားရပ်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးမှကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိ Xiaomi Scooter ကိုလုပ်သောကြောင့်မက်ဒရစ်ကဲ့သို့မြို့များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်အလုအယက်နာရီအသွားအလာနှင့်ဗဟို Madrid ၏ပရမ်းပတာကိုရှောင်ရှား။
သင်တို့သိသည်နှင့်အမျှသင်တို့အများစုသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုကို scooters များဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်သံသယများကြောင့်မပြီးဆုံးသေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်းသင်မကြာခဏကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုစုဆောင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့က Scooter ကိုသုံးနိုင်သည် စိုစွတ်သောကြမ်းပြင်များသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်မိုးရွာရွာများတွင်ပြproblemနာမရှိပါ။ IP54 ကာကွယ်မှုသည်ဖုန်မှုန့်၊ ဖုန်နှင့်ရေတို့သည် connector များနှင့်လျှပ်စစ်စနစ်ထဲမ ၀ င်စေရန်သေချာစေသည်။ ငါတို့အဝတ်အစားများစွန်းထန်ခြင်းမှရွှံ့သို့မဟုတ်ရေကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်ရှိအကာအရံလည်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းအများစုမှာ၎င်းတို့ဖြစ်သည် ပြproblemsနာမရှိဘဲသူတို့ကို upload တင်လိမ့်မည် သင်သိသင့်သည်မှန်သော်လည်းမညီမျှမှုကိုကျော်လွှားရန်အင်ဂျင်ပြုလုပ်သောအပိုစွမ်းအင်ဖြန့်ဝေမှုသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
Xiaomi သည်တရားဝင်ကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာအဝေးကိုတရားဝင်ကြေငြာသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည် 20km နှင့် 25km အကြားအကွာအဝေး.
ကီလိုမီတာအနိမ့်ဆုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့်ကားမောင်းမှုအမျိုးအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့အလေးချိန်ချိန်ခြင်း၊ မြေအနေအထားအနေအထား၊ အဆုံး၌ကားသည်ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောဓာတ်ဆီကိုသုံးစွဲသည်ဖြစ်စေသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အချက်များကိုဤစက်ဘီးအမျိုးအစားသို့ extrapolated နိုင်သည်။
အလွန်လုံခြုံ ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျဉ်းမြောင်းသောလက်ကိုင်နှင့်အတူထောင့်ရန်, ဘရိတ်နှင့်အရှိန်မြှင့်၏ခံစားမှုရရှိစသည်တို့ဖို့အသုံးပြုရရန်အချို့သောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လိုအပ်သည်။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သင်သည်ထိုစတင်ကာလကိုကျော်ပြီးသွားပြီဖြစ်သည်။ ထို Scooter သည်သင်၏တိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်ကိုတဖြည်းဖြည်းတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
သံခမောက်လုံးတပ်ရန်သတိရပါ သင်၏ခရီးစဉ်များပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးမျှော်လင့်သည့်အချိန်နှင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များသည်လုံခြုံသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အချိန်၌ကျနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အခါကမျှမသိရပါ။ ကြောက်စိတ်ကိုရှောင်ပါ။
အပြည့်အဝတာဝန်ခံအချိန် ၅ နာရီလောက် ဒါကြောင့်ညအချိန်မှာအားသွင်းပြီးနောက်တစ်နေ့အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
စံလာကြသူမြား သူတို့ကလေထုအခန်းကိုသုံးကတည်းကဟုတ်တယ်။ တာယာအတော်လေးထူပြီးသင်ကွင်းပြင်ကိုလှိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုမဖမ်းဘူးဆိုရင်တော့ထိုးဖောက်ဖို့သင့်အတွက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။
သို့သော်သင်သည်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်အချို့တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ၈ လက်မအရွယ်တာယာများကိုအစိုင်အခဲဘီးတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မြေပြန့်၌မညီမညာဖြစ်နေမှုများသည် ပိုမို၍ သိသာစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းသို့ရောက်ရှိသွားသည်နှင့်အမျှထိုးဖေါက်ခြင်းများကိုသင်မေ့သွားလိမ့်မည်။
100Kg။ ဘက်ထရီများသည်ထောက်ခံမှုbelowရိယာအောက်တွင်ရှိသောကြောင့်ဤပုံကိုကျော်လွန်ရန်မသင့်လျော်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုတွင်အများဆုံးအလေးချိန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်ထရီများထိခိုက်။ မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပါကပြင်းထန်သောမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
မက်ဒရစ်တွင်သင်၏ကလေးများကိုလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရှာသောမိဘများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်၊ သူတို့က၎င်းတို့အားအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်ထောက်ပံ့မှုကိုပင်ဝယ်ယူလိုက်သည်၊ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ (လူနာသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်းသင့်ကလေးနှင့်သင်၏လုံခြုံမှုသည်အန္တရာယ်ရှိသည်) ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အတူတကွမကျော်လွန်ပါကပြproblemနာမရှိပါ။
Mi Electric Scooter ၏အားသာချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းနောင်တွင်ထုတ်ကုန်များ၏မူကွဲများအတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်သင့်သောအရာများရှိပါသည်။
ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါလက်ကိုင်အပေါ်တစ် ဦး display ကိုထည့်သွင်း ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစစ်မှန်သည့်အချိန်တွင်ဆိုင်ကယ်၏ရှုထောင့်များဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သွားနေသောအရှိန်၊ အမြန်နှုန်း၊ စုစုပေါင်းခရီးစဉ်သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည့်အချိန်စသည်တို့ကိုတွေ့မြင်စေသည်။ ၎င်းကိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအခြေခံအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လက်တွေ့မကျပါ။
အ ခေါက်inရိယာထဲမှာ creaks ဒါကြောင့်လည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တစ်ခုခုပါပဲ။ သုံးစွဲသူများစွာသည်ပြareaနာကိုဖြေရှင်းရန်ရာဘာ (သို့) 3D ပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းကိုနေရာချထားရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွားတတ်သောသတ္တဝါသည်များသောအားဖြင့် (များသောအားဖြင့်စက်ဘီးများစွာသည် cricket လှောင်အိမ်) ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံမှုကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေသော်လည်း၎င်းသည်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း ခေါက်သည့်အခါလွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Inline စကိတ်စီးများသို့မဟုတ်ခရီးဆောင်သေတ္တာများကဲ့သို့သောဘီးအချို့ကိုထည့်တာကောင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အဆိုပါအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာတစ်ခုလက်သီးကပြောင်းလဲလိမ့်မယ် ဆိုင်ကယ်၏အတူ။ အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပြီး၊ စကိတ်နှင့်အတူရွေ့လျားနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အရှိန်မြှင့်ခလုတ်ပေါ်တွင်ကြီးမားသောခြေချောင်းများရှိမည့်အစားအင်အားအားကိုင်တွယ်ထားခြင်းက ပို၍ လုံခြုံသည် လက်ရှိရှာပါ။
Xiaomi Qicycle Euni es808 Scooter တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုတိုးတက်စေရန်ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်နေသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ M365 ၏ဒုတိယမူကွဲကိုဤအရာအားလုံးနှင့်အတူမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ။
သုံးသပ်ချက် - Nacho
အဲဒါထိုက်တန်ရဲ့လား Xiaomi ဆိုင်ကယ်? လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ငါကကြီးမားသောမြို့ကြီးများ၏အနာဂတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤ၏သက်သေအထောက်အထားများ DGT လည်းသူတို့၏အသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိဖို့စောင့်ကြည့်တော်မူသောဤပုဂ္ဂိုလ်ရေး mobility မော်တော်ယာဉ်များ (VMP) ငှားရမ်းခွင့်ပြုမရေမတွက်နိုင်သောကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ကြောင်းသံသယရှိသည် အခြားယာဉ်များနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်အတူမတော်တဆမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
Xiaomi ၏စကူတာသည်အကြီးဆုံးမဟုတ်သော်လည်းအမြန်ဆုံးမဟုတ်ဘဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အမြင့်ဆုံးပေးသည့်ကုမ္ပဏီလည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လက်ရှိရောင်းအားအားလုံးတို့တွင်အမျှတဆုံးဖြစ်သည် စျေးကွက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားရှိသည်။ ပိုကောင်းတဲ့လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ရှိပါသလား ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကစျေးနှုန်းကိုနှစ်ဆ၊ သုံးဆတိုးစေတယ်၊ ​​ပိုအလေးချိန်ပြီးအနည်းဆုံးအလေးချိန်ရှိတဲ့လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ကိုလိုချင်သူတွေအတွက်ဒီဆွဲဆောင်မှုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ Xiaomi သည်အခြားအရာများထက်သာလွန်သည်။
အကယ်၍ သင်ကထိုအရာကိုသင်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်သွားလျှင်၊ သင်တိုတောင်းသောကာလ၌ amortize လိမ့်မည်ကတည်းကသင်၏ဝယ်ယူမှုအလွန်အကြံပြုသည်။ သင်၏ 280Wh LG ဘက်ထရီများကိုအားပြန်သွင်းခြင်းသည်သင်သာလျှင်အနည်းငယ်သာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ငွေစုဆောင်းမှုသည်သို့မဟုတ်ကားသည်ထူးခြားသည်ထက်ပိုသောအားသာချက်ဖြင့်၎င်းကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူနိုင်သည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလက်တွေ့တွင်သုညဖြစ်သည် ဝတ်ဆင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများ (ဘရိတ်ကေဘယ်၊ ဘီးများ ... ) ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်ရပ်ကွက်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်တွင်မဆိုအလွယ်တကူတွေ့နိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အိုင်ကွန် Multimedia ကျွန်တော်တို့ကို Xiaomi Scooter ရဲ့စမ်းသပ်မှုယူနစ်ပေးဖို့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Xiaomi M365 ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း